CJ PROJECT Apk Download ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
CJ PROJECT Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Salama mpilalao Simulator Bus, eto izahay miaraka amin'ny fitaovana hacking Android mahafinaritra ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe CJ PROJECT. Izy io no fitaovana farany an'ny Bus Simulator Indonesia, izay manolotra ny Bus, Turks, Templates ary ny hodiny rehetra hamaha maimaimpoana.
Bus Simulator Indonezia dia lalao video Android, izay ahafahanao milalao ny anjara asan'ny mpamily fiara fitateram-bahoaka. Iza no mandeha any amin'ny tanàna samihafa, rehefa maka mpandeha ary mandatsaka azy ireo any amin'ny gara. Izy io dia manolotra tontolo mitovy amin'i Indonezia amin'ny fampisehoana 3D avo lenta.
Ny bus isan-karazany dia azo vohana aorian'ny filalaovana tsara. Mora ny milalao ho an'ny mpilalao mahay, saingy somary mahasosotra. Manolotra ihany koa Volvo B11R, izay iray amin'ireo fiara fitateram-bahoaka tsara indrindra amin'ity lalao ity. Ny asa sarotra indrindra dia ny mamoha io bisy io.
Ka eto izahay miaraka amin'ity fitaovana ity, ahafahanao mamaha ny Volvo B11R sy ireo fiasa maro hafa. Izahay dia hizara ireo fiasa rehetra ireo aminao amin'ny antsipiriany etsy ambany. Noho izany, raha hampiasa an'ity fampiharana ity ianao. Avy eo izahay dia manoro hevitra anao momba izany.
Topimaso momba ny PROJECT CJ
Izy io dia fitaovana Android Hacking, izay manolotra ny hack ny lalao Bus Simulator Android Video. Izy io dia manome ny endri-javatra hidin-trano rehetra voahidy tsy misy karazana fahasarotana. Misy hacks samihafa amin'ity fitaovana ity, izay ahafahanao mifehy tanteraka an'ity app ity.
Ny App CJ PROJECT dia manolotra Bisy, araka ny fantatrao amin'ny voalohany, manana Bus tsotra fotsiny ianao. Mila milalao mampiasa an'io bus io ianao raha te hamaha ny hafa. Rehefa mahazo vola kely dia azonao atao ny mamoha ny hafa, saingy mila mandany ora maro ianao amin'ny filalaovana ity lalao ity. Amin'ny fampiasana an'ity hack ity dia azonao atao ny mahazo ny Volvo B11R maimaim-poana.
Hacking App dia manome dingana mitovy amin'ny kamiao ihany koa. Izy io dia manolotra ny lisitry ny kamiao rehetra amin'ity hack ity. Mila manokatra ny lisitry ny kamiao fotsiny ianao ary misafidy ny kamiao tianao hanokatra, dia ho voahidy tsy misy lalao.
Ny hoditra dia iray amin'ireo fananana tsara indrindra hahitana fahatsapana tsara amin'ny mpilalao hafa. Manolotra ny hoditra rehetra izy io, izay azonao ampiharina amin'ny fiara samihafa. Mila manampy ny hoditra tsara indrindra fotsiny ianao, amin'izay hahasarika sy hamoronana kokoa ny bisy anao.
Izy io dia manome modely mihitsy aza, izay azonao ampiasaina sy hanovana ny endriky ny fiara. Misy endri-javatra maro hafa amin'ity lalao ity, izay azonao jerena. Manolotra endri-javatra karama sasany toy ny, manokatra ny Volvo 7400 XL, izay fiara fitateram-bahoaka tsara indrindra.
anarana CJ PROJEK
Anaran'ny fonosana com.cjproject.bussid
Developer Mahesh Iliger
Nozarainay taminao ilay sombin-javatra sasany tao amin'ilay fizarana etsy ambony. Misy endri-javatra bebe kokoa, azonao zahana ao amin'ity rindrambaiko ity. Ao amin'ny lisitra etsy ambany dia hizara ny sasany amin'ireo lozisialy lehibe indrindra amin'ity rindrambaiko ity aminao rehetra izahay. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra etsy ambany.
Bisy sy kamio tsy mihidy
Tsindrona haingana an'ny Hacks
Paid Hacks dia azo zahana ihany koa
Interface mora ampiasaina
Tsy misy izany ao amin'ny Google Play Store. Noho izany, hizara rohy azo antoka sy miasa amin'ity fitaovana fanapahana hack ity izahay rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Ahoana ny fametrahana ny rakitra Apk?
Raha hametraka ny rakitra Apk dia mila manova fanovana eo amin'ny fikirana amin'ny fitaovana Android ianao. Mila mandeha any amin'ny Settings ianao ary manokatra ny fiarovana, ary avy eo mamela ny 'Source tsy fantatra'. Aorian'ity fizotrany ity dia afaka mametraka ny rakitra Apk amin'ny fitaovanao ianao.
Ny CJ PROJECT Apk no fampiharana tsara indrindra, ahafahanao mahazo ny endrika rehetra amin'ity lalao ity nefa tsy mandany fotoana fotsiny. Afaka mankafy ny traikefa tsara indrindra amin'ny filalaovana ianao. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary manomboka milalao. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, Entertainment Tags CJ PROJEK, CJ PROJEK Apk, Fampiharana CJ PROJECT, Hacking App Post Fikarohana
Wings Ek Udaan Apk ho an'ny Android [2022 Update]
Ibiza Video Chat Apk Download Ho an'ny Android [Fanavaozana 2022]